News 18 Nepal || कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमितमा देखियो यस्तो समस्या
काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलोको तुलनामा धेरै फरक छ । रोगीहरूलाई पहिलेको तुलनामा सास फेर्न गाह्रो परिरहेको छ । अनि अहिले कोरोनाका कारण विभिन्न शहरका अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको छ ।
घरैमा आइसोलेसनमा बसिरहेका रोगीले पल्स अक्सिमिटरमा अक्सिजन स्तर ९० भन्दा कम भएमा तत्कालै चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ र अस्पताल जानुपर्छ । कोरोना रोगीको शरीरमा अक्सिजनको कमी देखिएमा मैनबत्ती, ग्यास हीटर, ग्यास स्टोभ, पेन्ट थिनर, स्प्रे जस्ता कुरा टाढै राख्नुपर्छ । नत्र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
कोरोना रोगीले कुनै हालतमा धूम्रपान गर्नुहुँदैन । कोरोना रोगी भएको घरमा अरू कसैले पनि चुरोट पिउनुहुँदैन । अनि घरमा अगरबत्ती पनि बाल्नुहुँदैन । अक्सिजनका लागि इन्डोर प्लान्ट लगाउनुपर्छ । अनुलोम विलोम र प्राणायाम गर्नुपर्छ । लामो सास लिएर रोक्दा फोक्सो बलियो हुन्छ अनि सास फेर्न समस्या हुँदैन ।
रगतमा अक्सिजनको मात्रा सही राख्नका लागि हेमोग्लोबिन बढाउने खानेकुरा खानुपर्छ । आलु, तिल, काजु र च्याउ जस्ता कुरामा कपर भरपूर हुन्छ र यिनले रगतमा अक्सिजनको स्तर बढाउँछन् । हरियो सागपात र दाल प्रशस्त खानुपर्छ । नून कमै खानुपर्छ ।
कुन कुन वस्तुबाट सर्छ कोरोना ? यसो भन्छन् डा. अनुप